March 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Mar 31, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 19-08-1442 …
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Arbaco,Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 18-08-1442, oo waafaqsan 31-03-2021, Warka Subax waxaa soo jeedinaya…
guuleed	 Mar 30, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 18-08-1442…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Isniin,Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 17-08-1442, oo waafaqsan 30-03-2021, Warka Duhurnimo waxaa soo…
Dhegeyso Warka Subaxnimo Ee Radio Al-Furqaan
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Isniin ,Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 17-08-1442, oo waafaqsan 30-03-2021, Warka Subax waxaa soo jeedinaya…
guuleed	 Mar 29, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-08-1442…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Isniin,Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 16-08-1442, oo waafaqsan 29-03-2021, Warka Duhurnimo waxaa soo jeedinaya…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Isniin ,Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 16-08-1442, oo waafaqsan 29-03-2021, Warka Subax waxaa soo jeedinaya…
Ciidamo Katirsan Maamulka Jubbaland Oo Lagu Laayay Weeraro Ka Dhacay Duleedka Kismaayo
guuleed	 Mar 28, 2021 0
Howl gal ladaan oo isugu jiray dagaallo toos ah duqeymo qaraxyo Iyo kamaa'in ayaa waxay si gaar ah kaga dheceen deegaannada Buulo Gaduud iyo Baar-sanguuni oo dhaca duleedka Magaalada Kismaayo. Ciidmaada Xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab…